Haweenka | Radio Himilo | Page 5
Home / Haweenka (page 5)
Sabab la xiriirta midabka maqaarkooda ayaa looga reebay diyaarad!
Mahad Mohamed March 3, 2019
Himilo FM – Jordan Felix oo ah haweenay u dhalatay Mareykanka ayaa raacday diyaarad hase ahaatee waxay la kulantay xaalad dullinimo ah oo noqotay tii ugu adkeyd nolosheeda. Wargeyska Daily Mail ee dalka Ingiriiska ayaa qoray in Jordan raacday diyaarad ...
Morooko: Guurka macallimad iyo arday 19 jir ah oo dhaliyay dood kulul
Mahad Mohamed February 28, 2019
Himilo FM –Dalka Morooko, Macallimad guursatay arday kayar 10 sanno ayaa waxaa ka dhashay dood kulul, waxayna dadka u qeybsameen kuwa ku tilmaamay wax caadi ah iyo kuwa dhaleeceeyay. Sida ay soo warisay warbaahinta maxaliga ah, macallimada oo ah 29 ...
Haweenay si arxan darro ah uga aarsatay ninkeeda oo jeclaaday gabar yar
Mahad Mohamed February 26, 2019
Himilo FM –Haweenay ka soo jeeda Shiinaha ayaa si bahdilnimo ah uga aarsatay ninkeeda iyo haweenay u jeclaa kaddib markay ku xertay geed ku yaalla meel bannaan ah iyaga oo qaawan. Sida uu ku soo waramayo wargeyska Mirror ee dalka ...
Haweenay furriin ka dalbatay saygeeda markii uu casho u soo iibin waayay!
Mahad Mohamed February 25, 2019
Himilo FM –Haweenay u dhalatay Imaaraadka Carabta ayaa saygeeda ka dalbatay inuu u baxo maqaayad islamarkaana u soo iibiyo hal Hamburger ah marka uu soo dhameysto sheekada saaxiibbadiisa. Wargeyska Khaleej Times ayaa sheegay in ninka markii uu soo dhammeystay sheekada ...
Wax ka ogow haweenka ugu awooda badan caalamka
Mahad Mohamed February 21, 2019
Himilo FM –Lataliyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa mar kale noqotay hoggaanka liiska haweenka ugu awooda caalamka sida laga soo xigtay xog cusub oo Forbes daabacday. Angela Merkel ayaa kaalinta afaraad ka timid liiska shaqsiyaadka ugu awooda badan caalamka ee ...
Haweenay lagu qabtay Taiwan iyadoo xadeysa bisado!
Mahad Mohamed February 19, 2019
Himilo FM –Warbaahinta Taiwan ayaa sheegtay in garoonka Hong Kong lagu xeray haweenay iska soo dhigtay inay uur leedahay balse dhoofinaysay labo bisadood oo la soo xaday iyadoo ku qarinaysa dharkeeda. Dhacdadan waxay ku qasbaysaa maamulka garoonka Taoyuan inay sameeyaan ...
Haweenay 81 jir ah oo keligeed ku nool jasiirad!
Mahad Mohamed February 18, 2019
Himilo FM –Kim Sin-yeol waa 81 jir ka soo jeeda koonfur Kuuriya, waxay keli ku tahay oo ay ku nooshahay jasiiradda Dokdo oo ay ku wada muransan yihiin dalalka koonfur Kuuriya iyo Jabaan. Kim waa qofka keliya ee deggan jasiiradda ...
Morrocco: Haweenay ku tabarucday 1 Milyan oo doolar
Mahad Mohamed February 17, 2019
Himilo FM –Haweenay u dhalatay Morocco ayaa heshay ammaan iyo bogaadin kaddib markay 1 Milyan oo doolar ugu deeqday mashruuc dugsi waxbarasho looga dhisayo galbeedka dalkaasi. Wararka warbahaahinta Morrocco ayaa tilmaamaya in Najiyah Nadiir la xiriirtay maamulka gobalka iyo wasaaradda ...
Haweenay loo xukumay inay ku umushay musqul oo la sii daayay
Mahad Mohamed February 16, 2019
Himilo FM –Maxkamad ku taalla El Salvador ayaa sii deysay haweenay lagu xukumay 30 sanno oo xarig ah kaddib markay ku dhashay gudaha musqul. Evelyn Beatríz Hernández Cruz oo ah 20 jir ayaa seddex sanno oo xabsi ah qaadatay markii ...
Haweenay aan oggaan inay uur leedahay illaa ay ka dhasho!
Mahad Mohamed February 13, 2019
Himilo FM –Haweenay Ingiriis ah ayaa sheegtay inay tagtay isbitaal si looga daweeyo xannuun yar oo dhanka dhiigga ah hase ahaatee la suuxiyay, waxayse soo kacday iyada oo dhashay gabar. Lizza Davies ayaa xustay in aysan hore u oggaan inay ...